Macallimiin Cabasho Ka Muujiyay Takoor Ay Sheegeen Inuu Kula Kacay, Guddoomiyaha Waxbarashada Qaybta Bariga Hargeysa | Berberatoday.com
Macallimiin Cabasho Ka Muujiyay Takoor Ay Sheegeen Inuu Kula Kacay, Guddoomiyaha Waxbarashada Qaybta Bariga Hargeysa
November 22, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Macallimiintan oo ah dumar ayaa cabasho ka muujiyay guddoomiyaha waxbarashada ee Bariga Hargeysa, Idiris Maxamed Cumar (jabeel) oo ay sheegeen inuu ka hor istaagay xil dhanka mamuulka ah oo ay codsi u dirteen maamulka, halkaasi oo sida ay sheegeena hanjabaad iyo aflagaado kala kulmeen.
Kharda Daahir Cabdilaahi oo barre iyo maamule-ku xigeen ka ah dugsiga hoose dhexe ee macallin daa’uud oo u warantay wargeyska hubaal ayaa tidhi ; “waxa uu nagu sameeyay takooris ah ‘xil u diidis, waxa uu nagu xidhay adduun lacageed, oo aanaan awoodin, iyo weliba cagajuglayn, isagoo naga qaaday iskuuladii lanoo magacaabay.” Ayay tidhi Marwo Khadra Daahir Cabdilaahi, waxaanay sheegtay inuu guddoomiyuhu ugu mano sheegtay kursiga uu ku fadhiyo ee guddoomiyenimo, isla markaana haddii aanay laaluulush siinin isaga uu xidhi doono, waxaanay tidhi “waxaa uu si khaldan noogu yidhi is miisaama, haddii aanu haysano waxaanu isu miisaano waanu ganacsan lahayn. Waxaa uu nagu yidhi ‘haddii aydaan ismiisaamayn, cid ismiisaanta ayaan haystaa, sidaas ayaanu ku iibsaday labadayadii boos. Guddoomiyaha waxa iskaga jirta siyaasada iyo waxbarashada. Sidaa daradeed annagu manihin siyaasiyiin, siyaasadna shuqul kuma lihin, oo macallimiin ayaanu nahay.”
Waxa aan ka mid ahay 53 macalin oo jaamacadaha dalka lagu tabobarayo, loona tababbaro maamulka iyo maaraynta, kuwaas oo la doonayo inay wax ka badalaan maamulada ka jirta dugsiyada dalka. Sidaa daraadeed waxaanu u sheegaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacxliinta sare inay masuulkan sidan noola hadlay ay wax ka qabato, maadaama aanu nahay dad macallimiin ah oo aanaan kursi wasiirnmo olole ugu jirin, marka aanu laaluush ku bixinayno waxbarshada iyo aqoontyada aanu bulshada ugu tabarucayno” Ayay kusoo afmeertay hadalkeeda
Xigasho Wargeyska Hubaal